Ny saina tsara manoloana ny zava-drehetra dia manome fiainana sambatra kokoa. - Anony - Quote Pedia
Manantena antsika hatrany ny fanantenana. Manome antsika hery hitrandrahana izany na dia amin'ny fotoan-tsarotra aza. Amin'ny fiainana dia tsy handeha toy ny nalamina fotsiny ny zavatra. Ny làlana rehetra dia hanana fikaonan-dàlana fa mila mijanona kosa isika ary handresy ireo zavatra rehetra izay tonga ho sakana.
Tsy tokony ho kivy isika na mahatsapa fa manjo antsika irery ihany ny ratsy rehetra. Jereo ny manodidina. Samy manana ny anjarany avy ny rehetra. Fa ny fiainana dia momba ny fanodinana azy ireo ary mbola hahita fifaliana.
Mba hiaina fiainana sambatra sy afa-po, zava-dehibe ny hananantsika saina tsara. Manome antsika ny antony manosika ny fiandrasana ny ho avy izy ary hanao zavatra izay tsy noeritreretintsika raha tsy izany.
Ny herim-po, ny antony manosika ary ny fo hanao ny tsara dia afaka mitarika zavatra izay tsy takatry ny saintsika. Rehefa mahatsapa ho kivy isika, dia mahasoa foana ny manodidina ny tenantsika amin'ny eritreritra tsara sy ny olona tsara.
Izy ireo dia manentana antsika hiatrika ny zava-tsarotra iainantsika. Na dia tsy mahita olona manodidina antsika aza isika, dia tokony hikatsaka ao anaty tenantsika ny hery hiadiana amin'ny fahoriantsika. Rehefa mandeha ny fotoana, mitombo ity hery ity ary mahatonga antsika ho olona manana andraikitra kokoa.
Raha manana eritreritra tsara isika ary mianatra mijery ireo lafin-javatra tsara, dia mitaky ny lalantsika ny fahasambarana. Mianatra mankasitraka sy mankasitraka izay ananantsika isika. Isika manome lanja bebe kokoa ny zava-dehibe sy hankafizantsika azy bebe kokoa ary mampitombo ny vala maro ny fifaliana. Araka izany, mahita ny tenantsika isika sambatra sy afa-po amin'ny fiainana.
Quotes fiainana sambatra kokoa
Fifaliana ho an'ny fahasambarana
Quotes Mind Quotes
Quotes Mindset Quotes
Aza miova ho an'ny olona. Ho tian'ny olona ianao noho ny maha-ianao anao, na tsy ilainao amin'ny fiainanao izany. - Anonyme
Ny lesona iray lehibe indrindra amin'ny fiainana dia ny tokony hananantsika hatrany ny fiainantsika. Mpanorina ny…
Ny famoizam-po fotsiny dia mamono ny fahasambaranao ihany. Aza manao izany. - Anonyme
Ny famoizam-po fotsiny dia mamono ny fahasambaranao ihany. Aza manao izany. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aleo tsaratsara kokoa amin'ny fiainana tena izy fa tsy amin'ny media sosialy. - Anonyme
Taranaka fiankinan-doha amin'ny media sosialy ny taranatsika. Ny ankamaroantsika dia aleontsika tia ny tontolo virtoaly noho ny…
Mandehana moramora eo amin'ny fiainan'ny hafa. Tsy ny fery rehetra kosa no hita. - Anonyme
Mety mahita olona faly sy mitsiky foana isika mandritra ny fotoana rehetra, saingy tsy midika izany na izy…